DAAYIMTUU KARFAFFITTII G/Booranaa Ardaa Miyoo Hiddii Lolaa irraa. - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsDAAYIMTUU KARFAFFITTII G/Booranaa Ardaa Miyoo Hiddii Lolaa irraa.
DAAYIMTUU KARFAFFITTII G/Booranaa Ardaa Miyoo Hiddii Lolaa irraa.
“Bulchaa Aanaa Miyoo Jarso Anna Jarso dhiyeenna kan akkuma humnaan qaraa nama fiduu barate Hojjattoota Aanaa sektaraalee akka akkaa irra jiran kan quuqama Ummataa qabdu hojii irraa ari’uu irratti fuulleffate akkuma itti fufee jira. Guyyaa hardhaa Hojjataa waajira Qonnaa fi Qabeenna Uumamaa kan ta’e Dargaggoo Rooba Kiree(#Jiddaa_Abbaa_Liibee) Poolisii Humna Addaatiin fuusisee hiisise. Eessa akka geeffamellee hin beekan.
Mucaa kan armaan dura dhiyeennuma kan bilbilaan arrabsee “Ka haadha maqennessu, Haatee akkas tolcha” jedhee arrabse. Waani inni mucaa kan arrabseef isatti waan hojjattoota ari’ani Aada-Malee jedhee barreessee tanaaf malee wanni dhibiin hin jirtu. Adoo wanni feete jiraatteyyuu nami lafaa ka’ee haadha namaa hin arrabsu.
Tanumaan wal-qabatee Hojjattoota dhiyeenna kan innii hojii irraa ari’e keessaa #Liiban_Waaqoo_Raachaa hogganaa waajira PSMQN hojii irraa dhaabe. #Bulee_Bukkee Manaajera Ganda Dukkallee gaaffii tokko malee adoo ulaagaa seeraa hin guutin hujii irraa gaggeesse.
Akkasumallee hojjattooti hedduun yaada isaa yoo hin fudhatin Bilbilaan doorsia si ijjeesa jechuun lubbuun doorsisa.
Iyyanna tan wal-jalaa dabarsaa.”
Roobii Kiree Guyyaa sadiin dura waan Jaarsoon bilbilaan jedheen sodaatee fb irratti maxxansee ture Sagalee isaallee akka waraabbate dubbata. Jaarsoo Annaa nama waraanaa yoo ta’e malee qaraa nama finna hin ta’u! Ummata dura deemun waan diqqoo niti!
Ummati bulchan dhaaba siyaasaa tamuuyyu olitti laalamuu male.
Tilahun Gessesse “Harka Funee” 1991 @ Finfine University hall oromo music
Xoophiyaan Diigamuuf jedhanii Halkanillee Hirriiba keessa baaragaa buluum warri kun. Inni kun boo’icha Imimmaaniiti”Reefu dhiiga boossu. Abadan Rabbii Waliin Xoophiyaa Diignu malee nuttin hafummoo.
Magaalaa Finfinnee Kutaa Magaalaa Ekkaatti kan argamu, Mana Barumsaa Afaan Oromoo Gaara Guuriitti torbaan kana hofkarri uumamuu miseensi Gamtaa Maatii Barattoota mana barumsichas OMN-tti hime.
Miseensi Gamtaa Maatii Mana Barumsaa Gaaraa Guurii kun akka jedhetti, Manni Barumsaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti waggaa sadii dura Kabajamoo Pirezidaantii Oromiyaa duraanii Obbi Lammaa Magarsaatiin eebbifamee hojii baruufi barsiisuu eegale. Manneen Barnootaa idilee 4 keessatti Afaan Oromoo kan barsiifamu yoo ta’u, dareewwan dabalataa 34 ol keessatti, barnoonni Afaan Oromoo bara darbe kennamaa turuusaa dubbata.
Manni Barumsaa Afaan Oromoo Gaara Guurii manneen barnootaa Idilee Afaan Oromootiin barsiisan keessaa isa tokko yoo ta’u, deggersa Dhaabbata Miti Mootummaa (NGO) tokkootiin dhaabbatee kan saba keenyaaf arjoomame ta’uus odeeffanneerra.
Onkoloolessa 20, 2013 ganama naannoo Mana Barumsaa kanatti, hoofkarri guddaan dhalachuudhaan Poolisii Finfinnee fi Federaalaa bakka sanatti argamuun dhimmicha qabbaneessuu namni kun OMN-tti himeera.
Ka’umsi dubbii uumamee, qaamoleen gurmuutiin socho’an heddumminaan dhufanii Mana barumsaa kana seenuun “manni Barumsaa kun kan Oromoo miti. Kan keenya. Oromoon Oromiyaatti malee Finfinneetii lafa hin qabu. Afaan hojii Magaalaa Finfinnee afaan Amaaraati; manni barumsaa Afaan Oromoo nurraa haa cufamu. Manni barumsichi ijoollee keenyaaf haa banamu” dhaadannoo jedhu dhageessisaa turuu, namni kun OMM-tti himeera.
Barnoonni sababa dhibee vaayiresii Koronaatiif adda citee ture, bara kana waan iddootti deebi’eef barsiisonniifi barattoonni muraasni mooricha kessa turan nageenya isaaniif yaaddoo hamaa keessa galuu walga’ii ariifachiisaa Gamtan Barattootaa godheen hubachuu dandeenyeerra jedha.
Poolisiin waamicha hojjettootaa dhaga’uun atattamaa bakka sanatti argamanii, qaamolee kanneen keessa muraasa to’atanis, kanneen hafan ergasii as faara gaarii mullisaa hin jiran jedhu.
Qeellam Wallaggaa: waraanni goolessituu pp eda dargaggoo kana karaa irra osoo deemuu rukuttee ajjeeste.